दसैं युद्धपर्व कि कृषिपर्व | राेल्पा अनलाइन
दसैं युद्धपर्व कि कृषिपर्व
सेतोपाटी Sunday, October 1, 2017
कास्कीको मिया पाटन मुसलमान बहुल गाउँ हो। कुनै समय यहाँ रहमद अली र मोहम्मद मिया भन्ने मुखिया थिए। दसैं बेला वरिपरि गाउँका बाहुन, क्षेत्र, गुरुङ, मगर लगायत सबै जातजातिका मान्छे सगुन लिएर मुखिया भेट्न जान्थे। मुसलमान मुखियाका आँगनमा सगुन चढाएपछि मात्र यहाँका हिन्दुको दसैं पर्व सुरु हुन्थ्यो।
दसैं नै नमनाउने धर्मावलम्बीको गाउँमा प्रचलित यो ‘अनुकरणीय’ परम्परा उद्धृत गर्दै संस्कृतिविद् जगमान गुरुङ भन्छन्, ‘यो कुनै धर्म वा जाति विशेषको चाड होइन, हाम्रो विशिष्ट समन्वयकारी संस्कृति हो जसले सबै जातजातिप्रति उच्च सम्मान झल्काउँछ।’
यस्ता अनेक विशेषता छन्, जसले दसैं पर्वलाई हिन्दु धर्मको परिधिबाट माथि उठाएर सांस्कृतिक चाडका रूपमा स्थापित गर्छ।
नभए, भारतका हिन्दुले मनाउने ‘दशहरा’ सँग हाम्रो ‘दसैं’ किन भिन्न छ?
उनीहरू हामीजस्तै दुर्गा पूजा त गर्छन्, तर किन हामीजस्तै निधारमा रातो अक्षताको टीका र शिरमा पहेँलो जमरा उन्दैनन्?
किन टीकाको आशिषमा महाभारत र रामायणका पात्रहरूको नाम जप्छौं?
सबभन्दा पहिला, दसैंमा लगाइने टीका र जमराबाट सुरु गरौं।
टीका र जमरा हटाइदिने हो भने हाम्रो दसैं र भारतको ‘दशहरा’ बीच खासै भिन्नता रहँदैन। भारतका हिन्दु धर्मावलम्बी दशहरामा नवरात्रिभरि उत्सव गर्छन्, तर विजया दशमीको दिन हामीले जस्तो टीका र जमरा लगाएर ठूलाबडाको आशीर्वाद थाप्दैनन्। धार्मिक चाड मात्र हुँदो हो त हाम्रो दसैं मनाउने आधारभूत तरिकामै यति ठूलो भिन्नता हुँदैनथ्यो।
‘झरी थामिएर शरद ऋतु सुरु भएपछि कृषकहरू खेतबारीको कामबाट मुक्त हुन्थे। अनि बालीनाली भित्र्याएर लडाइँको तयारीमा लाग्थे। आफूसँग भएका सबै हतियार सरसफाइ गर्थे र साँध लगाउँथे। त्यसपछि तिनै हतियारको पूजा हुन्थ्यो। विजया दशमीको दिन घटस्थापनामा राखिएको घडाको पानीले हातहतियार अभिषेक गरेपछि निधारमा दही र चामल मुछेको टीका लगाएर हर्षबढाइँका साथ युद्धको अभ्यासमा निस्कने चलन थियो,’ उनी भन्छन्।
भोलिपल्ट अष्टमीको दिन झुल्के घाससँगै खसी–बोका बलि दिइन्छ। कहीँ नगराको आवाज त कहीँ मालसिरी धुनबीच दसैं उद्घोष हुन्छ। बलि दिने चलनलाई जगमान ‘शक्तिको उपासना’ सँग जोड्छन्। नगरा र मालसिरी धुन भने सेनाको हौसला बढाउँदै चारै दिशामा युद्धको डंका पिट्न बजाइएको उनको भनाइ छ।
अष्टमीको दिन मालसिरी धुनसहित कोतमा गएर मार हान्ने चलन छ। कुनै समय काठमाडौंका नेवार शिरमा सेतो फेटा गुथेर सेतै जामामा खुँडा नचाउँदै नगर परिक्रमा गर्थे। ‘यो एक किसिमले युद्धकै तयारीको झल्को दिने रीत हो,’ उनले भने।
यसरी कुनै बेला रगतमा मुछेको अक्षताको टीका लगाएर आएका हामीले एकैचोटि अबिरमा चामल मुछेर रातो टीका लगाउन थालेका होइनौं। यसबीच गुरुङ, मगर, राई, लिम्बू, तामाङ, नेवार लगायत जनजातिदेखि खसआर्यसम्मले सेतो टीका लगाउने गरेको जगमानको भनाइ छ।
रातो र सेतो टीकाबीचको विवाद नै उनी निरर्थक मान्छन्। ‘यो नचाहिँदो विवाद हो। आज हामी जनजातिले मात्र सेतो टीका लगाउँछन् भन्छौं। रातो टीका लगाउन थालिसकेका जनजाति पनि आफ्नो पहिचान भन्दै सेतोमै फर्केका छन्। वास्तवमा, जनजाति मात्र होइन, खसआर्यले लगाउने भनेको पनि सेतै टीका हो,’ उनले भने।
‘शृंगारिक हिसाबले पनि सेतोभन्दा अबिर मुछेको रातो टीका राम्रो देखिएपछि यसको प्रभाव बढ्दै गएको हुनसक्छ,’ उनले भने, ‘जनजातिहरू भने पहाडतिरै बसे। अबिर प्रयोग गर्न उनीहरूले धेरै ओहोरदोहोर गर्नुपर्थ्यो। अन्ततः सेतोलाई नै आफ्नो पहिचान ठान्न थाले।’
घरभित्र जमरा उमार्नुलाई त उनी सानोतिनो कृषि कर्मसँगै दाँज्छन्। हाम्रो जीविकामा कृषिको कति धेरै महत्व छ भनेर यसले झल्काउने उनको भनाइ छ। जमरा छोपेर पहेँलो पार्नुलाई उनी शृंगारका रूपमा लिन्छन्।
‘जौ तागतिलो अन्न हो, त्यसैले माटोको पूर्वपरीक्षण र बीउ कति उब्जाउ छ भनेर अड्कल काट्न जमरा रोप्ने चलन सुरु भएको हुनसक्छ,’ उनले भने, ‘गाउँघरतिर जहाँ जौ हुँदैन, त्यहाँ मकैको जमरा हाल्ने चलन छँदैछ।’
रातो र सेतो टीका विवादमा पनि तेजेश्वरबाबुको तर्क जगमानसँग मिल्दैन।
उनी यी दुईथरी टीका लगाउने चलनलाई समुदायको वंश परम्परासँग जोड्छन्। ‘सूर्यको प्रकाशलाई पुज्ने सूर्यवंशीहरू त्यसको तातो र न्यानो किरणसँग मिल्ने रातो टीका लगाउँछन्, जबकि चन्द्रमालाई पुज्ने चन्द्रवंशीहरू त्यसको शितल र सेतो किरणजस्तै सेतो टीका लगाउँछन्,’ उनले भने।
‘काठमाडौं उपत्यकामा पछिसम्मै सेतो टीका लगाउने चलन थियो, उता किराँतहरू पनि सेतै लगाउँथे। यी सबै चन्द्रवंशीय हुन्,’ तेजेश्वरबाबुले भने, ‘गोरखाका सूर्यवंशी राजा पृथ्वीनारायण शाह भने रातो टीका लगाउँथे। गण्डक क्षेत्रतिर रातैको चलन थियो। राज्य विस्तार क्रममा काठमाडौं उपत्यका जितेपछि पृथ्वीनारायण र उनका भाइभारदारले आफूसँगै रातो टीका लिएर आए। यसले काठमाडौं उपत्यकाबाट विस्तारै सेतो टीका लगाउने चलनै हरायो।’
तेजेश्वरबाबु अझै पनि आफ्नो परिवारमा सेतो टीका लगाउने चलन रहेको बताउँछन्। उनको भनाइ छ, ‘रातो टीका त हामीले अरूको देखासिकी लगाउन थालेका हौं।’
संस्कृतिविद् ग्वंगः कालो टीका लगाउनुका दुइटा कारण देख्छन्।
आयुर द्रोण सुते श्रेयम दशरथे, शत्रुक क्षेयम रघवे,
ऐश्वर्यम् नहुशे, गतिस्च पवने, मानन्च दुर्योधने
सौर्यम शान्त नवे, बलम हलधरे, सत्यस्च कुन्तीसुते,
विज्ञान वदिुरे, भवन्तु भवताम्, कीर्तिस्च नारायणे!
आयुर द्रोण सुते (द्रोणका छोरा अश्वत्थामाजस्तै लामो आयु होस्)
श्रेयम दशरथे (दशरथको जस्तै श्रेय पाइयोस्)
शत्रुक क्षेयम रघवे (रामचन्द्रले जस्तै शत्रु नाश गर्न सकियोस्)
ऐश्वर्यम् नहुशे (नहुश राजाको जस्तै ऐश्वर्य होस्)
गतिस्च पवने (पवनको जस्तो गति होस्)
मानन्च दुर्योधने (दुर्योधनको जस्तो मानमर्यादा कमाइयोस्)
सौर्यम शान्त नवे (सूर्यका छोरा कर्णजस्तो दानी होओस्)
बलम हलधरे (हलोधारी बलरामजस्तै बलवान् होओस्)
सत्यस्च कुन्तीसुते (कुन्तीका छोराले जस्तै सत्य बोल्नू)
विज्ञान विदुरे, भवन्तु भबताम् (विदुरजस्तै ज्ञान-विज्ञान, शास्त्र बुझेको होओस्)
कीर्तिस्च नारायणे (भगवान नारायणको जस्तै कीर्ति हासिल गर्नू)
संस्कृतिविद् गुरुङ यो आशीर्वाद युद्धसँगै सम्बन्धित रहेको बताउँछन्।
लडाइँमा जाने योद्धामा रामायण र महाभारतकालीन पात्रझैं शक्ति आओस् र त्यसरी नै शत्रु पराजित गर्न सकोस् भनी कामना गर्ने अभिप्रायले यस्तो जपना गरिएको गुरुङको भनाइ छ।
‘ती लडाइँमा सिंगो राज्य नै रित्तिएको थियो भन्ने हामीले पढेका छौं। त्यतिबेला युद्धको धङधङीले धेरै मान्छेको ज्यान लियो, धेरै विधवा भए। कतिले आफ्ना छोराछोरी गुमाए त कतिले आमाबाबु। त्यत्रो मानवीय विनाशले परिवार मात्र होइन, सिंगो राष्ट्रलाई नै विच्छृखंल बनाएको थियो। त्यही स्थिति फेरि नदोहोरिओस् भनेर रामायण र महाभारतकालीन युद्धका पात्रजस्तै शक्ति आर्जन होस् भनी नाम जपेको हुनसक्छ,’ गुरुङले भने।
हाम्रो दसैंको अर्को विशेषता दुर्गा पूजा पनि हो। भारतमा बंगालीहरू दुर्गा पूजा गर्छन्, अन्यत्र भने ‘असुरका राजा’ रावणमाथि रामको विजयोत्सवका रूपमा ‘दशहरा’ मनाइन्छ। यस क्रममा ठाउँठाउँमा पण्डाल लगाएर रावणको पुत्ला दहन गर्ने चलन छ।
उनका अनुसार यो भारतको गंगा किनारका मैदानमा विकसित संस्कृति हो, जबकि यहाँको दुर्गा पूजालाई उनी नेपालको पहाडी भेगमा विकास भएको मान्छन्।
‘पुत्ला दहन आयातीत संस्कृति हो,’ उनले भने, ‘यसलाई बसाइसराइँका क्रममा बाहुन–क्षत्रीहरूलै नै नेपाल ल्याएका हुन्।’
यसरी युद्धसँग जोडिएको दसैं संस्कृतिको थालनी र दुर्गा पूजाको सुरुआत पहाडी जनजातिले गरेका हुन् भन्ने गुरुङको तर्क छ।
उतिबेला सेनामा अग्रपंक्तिमा रहेर लडाइँ गर्ने भनेका पहाडी जनजाति हुन्। युद्ध मैदानमा जानुअघि बलि दिँदा मार हान्ने जिम्मा जनजातिलाई दिइन्थ्यो। उनीहरू सुरो स्वभावका भएकैले यस्तो जिम्मेवारी दिइएको गुरुङको भनाइ छ।
यही तर्कमा टेकेर उनी भन्छन्, ‘दसैं भनेको जनजातिहरूकै संस्कृति हो, बलि हान्नेदेखि अक्षतामा रगत मुछेर टीका लगाउने चलन जनजातिबाटै सुरु भएको हो। अहिले आएर मौलिकता खोज्ने नाममा दसैंलाई बाहुन–क्षत्रीको चाड भनेर आफू बाहिर बस्नु हाम्रो आफ्नै पुर्खाको शानको अपव्याख्या हो।’